#28 Ibhuloho - I-Airbnb
#28 Ibhuloho lisenhliziyweni yeSt Lucia. Phakathi nebanga lezindawo zokudlela, amabhishi nezitolo. Indawo yefulethi iseduze ne-estuary ne-jetty emangalisayo yokujabulela i-sundowner futhi ulalele i-Hippo. Jabulela ukuhamba ngesikebhe esincane, ukushayela umdlalo ezindaweni ezinhlanu zemidlalo noma ulale ogwini futhi ujabulele isimo sezulu esihle se-St Lucia. Uma ungumndeni noma iqembu labangane babheka i- #29 the Bridge, eduze komunye nomunye futhi ilungele amaqembu.
Ibhuloho yindawo enhle yefulethi enendawo yokubhukuda, inkundla ye-squash, indawo ye-braai nokufinyelela okuqondile ku-jetty yangasese ku-estuary. Le ndawo iphephile ngesango lokuvikeleka, onogada bamahora angu-24 futhi iphephile ngaphansi kwendawo yokupaka. Phakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo lezitolo nezindawo zokudlela ezihlukahlukene. Ibhishi, ukuhamba ngesikebhe, ukudoba olwandle olujulile kanye nokushayela imidlalo, ezinye zezinto eziningi ongazenza e-St Lucia. I-Hippo, izinkawu ze-Vervet ne-Mongoose zibonakala njalo engadini.
#28, esanda kulungiswa ngo-2019 yifulethi elihlomele ngokuphelele u-100% wokuziphekela. Shayela ukuhlanza, ngemali ingahle ihlelwe kusayithi. Amakamelo amabili, elilodwa elinombhede olala abantu ababili kanti elinye linemibhede emibili elala umuntu oyedwa. Igumbi lokugezela lineshawa negumbi lokugezela. Ikhishi elifakwe ngokugcwele, elinamashidi namathawula anikeziwe. I-DSTV, ne-Wi-Fi Yamahhala, elungele ukusakaza amabhayisikobho, i-air-con egunjini lokuphumula. I-verandah ibheke ingadi enotshani nendawo yokubhukuda.
Ukufinyelela kuyo yonke ifulethi, indawo yokubhukuda, i-squash nenkundla yomdlalo webhola lomphebezo, indawo ye-braai, i-jetty ne-Laundromat.
Umsizi wesihambi uhlala egcekeni.
I-St Lucia ingaphakathi kwesitoreji semvelo, iSimangaliso wetland Park. Idolobha elincane elinezindawo zokudlela nezitolo eziningi, konke ngaphakathi kwamakhilomitha angu-2 ukusuka efulethini.
Ukuhamba ngebhayisikili nokuhambahamba kuyindlela enhle kakhulu yokuhambahamba.
I-St Lucia ihlanzekile, iphephile futhi inezindawo zokudlela eziningi nemisebenzi ongakhetha kuyo. Insipho yokuzikhethela.
I am a HR manager and mom of two.
Uzohlangana neqembu lami lokuhlanza nokuphatha u-Joey no-Sharon. Bazokukhombisa ngenjabulo futhi bakusize nganoma yimaphi amalungiselelo.